बी डिभिजन लिगमा श्री भगवतीको दोस्रो जित – Khel Dainik
बी डिभिजन लिगमा श्री भगवतीको दोस्रो जित
काठमाडौं (खेलदैनिक) । शहिद स्मारक बी डिभिजन लिगतर्फ श्री भगवती क्लबले बिहीबार दोस्रो जितकोस्वाद चाख्न सफल भएकोछ । श्री भगवतीले दोस्रो जित हात पार्ने क्रममा झम्सीखेल युथ क्लबमाथि ३–२ को प्रतिस्पर्धात्मक जित हात पार्यो ।
एन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न खेलको ११औं मिनटमा झम्सीखेलका सुनिल शाहीले आत्मघाती गोल गर्दा श्री भगवतीले खेलमा शुरुवाती अग्रता बनाउन सफल भएको थियो । यद्यपि ३२औं मिनटमा झम्सीखेलका लागि मदन स्याङतनले बराबरी गोल फर्काए ।
दोस्रो हाफको ५७औं मिनटमा नवराज गुरुङले श्री भगवतीका लागि दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई फेरि खेलमा अग्रता दिलाएका थिए । तर ७४औं मिनटमा अनिष चौधरीले झम्सीखेलका लागि गोल गर्दै खेललाई रोमाञ्चक २–२ को बराबरीमा ल्याएका थिए ।
तर खेल सकिन केही मिनट बाँकी छँदा मोहन बहादुर थापाले श्री भगवतीका लागि तेस्रो तथा निर्णायक गोल गर्दै टोलीलाई महत्वपूर्ण जित दिलाए । यो जितसँगै ९ खेलबाट ९ अंक जोडेको श्री भगवती लिगतालिकाको आठौं स्थानमा छ । उता पराजित झम्सीखेल भने ६ अंकका साथ ११औं स्थानमा छ ।
त्यस्तै बिहीबार नै भएको अर्को खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसिटी) र श्री कुमारी क्लबले १–१ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । खेलको तेस्रो मिनटमै अजित गुरुङको गोलबाट अग्रता बनाएको आरसिटीले त्यसलाई जोगाउन सकेन । उता श्री कुमारीका लागि २२औं मिनटमा युवराज राईले बराबरी गोल फर्काएका थिए ।
यो नतिजापछि ९ खेलबाट १३ अंक जोडेको आरसिटी लिगतालिकाको पाँचौं स्थानमा छ । उता श्री कुमारी भने ८ अंकका साथ लिगतालिकाको नवौं स्थानमा रहेको छ ।
← प्रदेश १ मेयर कप ब्याडमिन्टन सुरु, “खेलाडी राष्ट्रका गहना” सलहेश र एफसी मुन्डियल उपाधिका लागि भिड्ने →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने फाल्गुन २०, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? फाल्गुन २०, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली फाल्गुन २०, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा फाल्गुन २०, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित फाल्गुन २०, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा फाल्गुन २०, २०७७